Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Thailand Izindaba Ezintsha » Uhlu lokuthi yiziphi izindawo ezivulwa kabusha eBangkok ngenxa ye-COVID
Izindaba Ezintsha • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Ukwakha kabusha • I-Thailand Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Izinhlobo eziningi zezindawo namabhizinisi eBangkok avunyelwe ukuqala kabusha ukusebenza okuqala namuhla, ngoJuni 22, 2021, ngaphansi kwe-Order yakamuva yokuValwa Kwesikhashana Kwendawo (No. 33).
Isimemezelo Samuva Sikahulumeni waseThai
I-Bangkok Metropolitan Administration (i-BMA) imemezele i-oda lakamuva lokuvalwa kwesikhashana kwezakhiwo (No. 33).
Lokhu kulandela isimemezelo sakamuva sikaHulumeni waseRoyal Thai sokuqhubeka nokuxegisa izinyathelo ze-COVID-19 ezweni lonke.
Funda ukuze uthole uhlu oluningiliziwe lokuvula kabusha nokulungele ibhizinisi.
Thola ukuthi yini esohlwini kusuka kumachibi okubhukuda omphakathi kuya emapaki omphakathi, iminyuziyamu kuya emasongweni okulwa amaqhude, izinsimbi zokubhowula kuya emijahweni yamahhashi, izikhungo zokwehlisa isisindo kuya ezindaweni zokucwala ubuhle, nokunye.
Amachibi okubhukuda omphakathi noma amanye amabhizinisi afanayo.
Zonke izinhlobo zamachibi noma amachibi ezemidlalo noma imisebenzi yasolwandle, efana ne-jet skiing, kitesurfing, kanye nokuhamba ngesikebhe sikabhanana kuvunyelwe ukuvula inani lamakhasimende elinganiselwe kuze kube ngamahora angama-2100. futhi bavunyelwe ukubamba imicimbi yezemidlalo ngaphandle kwezethameli.
Izikhungo zokufunda, izikhungo zesayensi zemfundo, amapaki wesayensi, izikhungo zesayensi namasiko, nemipheme.
Imitapo yolwazi yomphakathi, imitapo yolwazi yomphakathi, imitapo yolwazi yangasese, nezindlu zokubhukha.
Izitolo ezithengisa ukudla noma isiphuzo - ukudla nokudla okuphuzwayo kulezi zindawo kuvunyelwe kuze kube amahora angama-2300. Lezi zindawo zizokhawulela inani labantu abadla ukudla neziphuzo kube ngamaphesenti angama-50 ngenani lezihlalo ezijwayelekile. Ukuphuza utshwala neziphuzo ezidakayo kulezi zindawo akushiwo.
Zonke izinhlobo zezindawo zemidlalo zangaphakathi nezingenisa umoya kahle zivunyelwe ukuvulwa kuze kube amahora angama-2100 futhi zivunyelwe ukubamba imicimbi yezemidlalo ngaphandle kwezethameli.
Izitolo ezilula zingaqala ukusebenza ngesikhathi sazo esijwayelekile.
Noma yimiphi imisebenzi ethambekele ekusakazekeni kwezifo, njenge, imihlangano, izingqungquthela, amadili, ukwabiwa kokudla noma izinto ezihlobene, amaqembu, amatende, ukukhiqizwa kwamafilimu noma kwethelevishini, imisebenzi yezenkolo, ukuzijwayeza kweDharma, kanye nemihlangano nezihlobo eziphezulu kungahlelwa kepha inombolo lababekhona akumele beqe abantu abangama-50.
I-Oda 32 yakamuva ye-BMA ivumele izinhlobo ezinhlanu zezindawo ukuthi zivulwe kabusha e-Bangkok.